अचम्मको भिडियोः यी युवतीले दुबै हात बिना कार चलाउँदै ! भिडियो अवस्य हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > अचम्मको भिडियोः यी युवतीले दुबै हात बिना कार चलाउँदै ! भिडियो अवस्य हेर्नुहाेस्
यस बारे पूरा भिडियो तल छ। हामी धेरै रोचक जानकारी, भिडियो, फोटो, सचेतना भिडियो, अध्यात्म, रेसिपी, सौन्दर्य टिप्स, तमिल र भारतीय समाचार, घरेलु औषधि सुझावहरू पोस्ट गर्न जारी राख्नेछौं र हेर्नको लागि रमाइलो गर्नेछौं। हामी यहाँ तपाइँको मनपर्ने समाचारहरू दैनिक साझा गर्नेछौं।
यहाँ पूरा भिडियो हेर्नुहाेस्ः
यू ट्युबमा अहिले सम्मको रेकर्ड तोडेको भिडियो
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाली शैक्षिक मनोरञ्जन फर्म पिंकफङले निर्माण गरेको बेबी शार्क गीतलाई अहिले सम्म यूट्युबमा १० अर्व पटक भन्दा बढी हेरिएको छ ।
यस गीतमा कोरियन –अमेरिकी गायिका होप सेगोइनले आफ्नो स्वर दिएकी छिन् ।अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममका अनुसार यो गीत साना बच्चाहरुको लागि हो । यो गीत सन् २०१६ मा रिलीज भएको हो । नोभेम्बर २०२१ मा यो गीत ७ दशमलव ४ अर्ब पटक हेरिएको थियो भने अहिलेसम्म आउदा १० अर्ब पटक भन्दा धेरै हेरिएको छ ।
यो गीतलाई ३ करोड ३० लाख भन्दा बढी मानिसले लाइक गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अहिले यो गीत खुबै चर्चामा छ । यो गीतप्रति धेरैले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । बच्चाको गीत भएपनि यो विश्वमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियो बनेको छ ।
अन्त्यमा कसरी झुके माधव नेपाल?
धादिङको गल्छीबाट टिकटक बनाउने महिला पक्राउ, गरेकि थिईन अनौठो हर्कत
पथरीमा दिपावली मनाउँदै गर्दा बालेको दियोबाट आगाे सल्किदा बालकको मृ त्यु